Nikaragoà: Rindrambaiko Malalaka Ao amin’ny Andrim-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Deutsch, Español, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jolay 2008 ity adika eto ity)
Fiteny tamin'ny taona 1970 ny “Territorio Liberado”, na Tany Afaka ho fanamarihana ny fiafaran'ny didy jadona na ny governemantan'i Anatasio Somoza, tao amin'ny tanàna na faritra manokana. Tato ato, miresaka momba ny karazana fahalalahana vaovao ny vondrona Linux sy Open Source ao an-toerana: ny fahalalahana hamorona sy hamolavola ny rindrambaiko sy ny teknolojian'izy ireo manokana, tsy misy famerana momba ny fahazoan-dalana sy sarany mety hanakana.
Miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana ilay bilaogera LEOGG mba hahazo vahana amin'ireo teknolojia sy hahatonga azy ireo mahomby kokoa. Tamin'ny lahatsorany “Nicaragua Libre” (Nikaragoà Malalaka), nanazava ny fomba nanampian'izy ireo an'i Jalapa, tanàna ambanivohitra akaikin'ny sisintanin'i Honduras ao avaratry ny firenena mikasika ny fomba famolavolàna sy fampiasàna ny rindrambaiko Linux i LEOGG.
Misy tetikasa roa mahaliana mahakasika ny Ubuntu ao. Ny voalohany dia ny fampidirana aterineto an'ireo antontan-taratasim-panjakana an'arivony amin'ny fampiasàna ny Ubuntu Hardy sy XSane. 15 ny isan'ireo solosaina natokana manokana amin'ity asa ity.
Ny tetikasa iray hafa dia mahakasika ireo tranoheva fandraisam-bola miisa 12 amin'ny Ubuntu sy rindrambaiko sahaza handraisana sy handoavam-bola.
Fanampin'izany, amin'ny dingana voalohany amin'ny Tetikasa Fifindrana, solosaina teo amin'ny 50 teo no navadika ho Ubuntu ao amin'ny departemanta isan-karazany.
Ny zavatra tena mahafinaritra momba izany rehetra izany dia nangataka fanampiana taminay ny biraom-panjakana, ka vokatr'izany, lasa mpiasa tontolo andro ny telo tamin'ireo ekipanay, manome fanohanana an'i Ubuntu ho an'ireo mpisera azy ireo.
Sary avy amin'i LEOGG, nampiasaina teo ambany lisansa Creative Commons. Raha hijery sary maro hafa, tsidiho azafady ny bilaoginy.
Tsy mifantoka amin'ny vondrona ambanivohitra na governemanta ihany ny “comuNIdad” (izany no fiantsoan'izy ireo ny tenany). Manazava amin'ny lahatsoratra manaraka i LEOGG fa “handefa fandaharana amin'ny fantsona be mpanaraka” izy ireo.
Canal 2, tambajotra fahitalavitra lehibe indrindra ao Nikaragoà no handefa fandaharana momba ny teknolojia isak'herinandro, isaky ny talata, manomboka amin'ny 15 Jolay.
Ireo mpamokatra ity fandaharana vaovao ity dia… eny, fantatrao! …ny LUG (Vondrona Mpikirakira Linux) ao an-toerana.
Mandrindra ireo mpisera avy amin'ny fitsinjarana sy fitsipika maro ny LUG ho an'i Nikaragoà, anisan'izany ireo developera Ubuntu, SUSE, Mandriva, sy ireo tsiro hafa. Ny tranonkala iombonan'izy ireo dia ny Linux.org.ni.
Afaka mijery vaovao fanampiny sy fomba fijery amin'ny asan'ity vondrona ity ao amin'ny Tahirin-gazetin'izy ireo ianao.